FreedomFightsFake မြန်မာ | Friedrich Naumann Foundation
FreedomFightsFake မြန်မာ Spotlight
FreedomFightsFake မြန်မာ :
#FreedomFightsFake ကတစ်ကမ္ဘာလုံးက ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သတင်းအမှားတွေကိုသတိပြမိစေဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ သတင်းမှားတွေကို ဘယ်လိုတိုက်ဖျက်ကြမလဲ? အားလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ သတင်းအမှားတွေရန်ကနေ ဘယ်လို လွတ်‌မြောက်အောင် ဖန်တီးနိုင်မလဲ? စတာတွေကို အခုကမ်ပိန်းကနေတစ်ဆင့် အဖြေထုတ်နိုင်ပြီး သတင်းအမှားတွေကို အတူတကွ တိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။